အကောင်းဆုံးနှိုးစက် Android အတွက်နာရီ Apps ကပ Widgets | နိုးထရန်အဆင်သင့်ရ!
ပင်မစာမျက်နှာ » ဘ‌‌လော့ခ် » Android အတွက်အကောင်းဆုံးနှိုးစက်နာရီ Apps ကပ Widgets
အန်းဒရွိုက် APK ကိုအကောင်းဆုံးနှိုးစက်နာရီ Apps ကပ Widgets
စမတ်ဖုန်းကွဲပြားခြားနားသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုရနိုင်ပေမယ့်ကျွန်တော်နေဆဲအချိန်အများစုကိုနာရီအဖြစ် အသုံးပြု. တက်အဆုံးသတ်။ ပျမ်းမျှအားတွင်, ငါတို့အကြောင်းကြားစာများနှင့်အချိန်စစျဆေးဖို့နေ့တိုင်းကြိမ် 20 မှ 30 ကျော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ကိုသုံးပြီးပါပြီ။ ဒါဟာပကတိအချိန်ကိုပြောပြနှငျ့သငျ timer နေရာမှာနှင့်နှိုးဆော်သံအကြောင်းကြားစာများပေးသောတစ်ဦးအေးမြနာရီ app ကိုရှိသည်ဖို့သဘာဝကျပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ပင်မမျက်နှာပြင်နှင့်ကိုက်ညီခြင်းအရောင်စီစဉ်သွားနေတယ်ဆိုရင်, သင်အလွယ်တကူအကောင်းဆုံးကိုနှိုးစက်နာရီနှင့်အတူဒီဇိုင်းကိုမှပြီးသွားထိထည့်နိုင်သည် Android အတွက် Widgets တွေ apps ။
သင်အမှန်တကယ်အချိန်ကိုကြည့်ရှုရန်သင့်ဖုန်းကို unlock မှမရှိကြပါဘူး။ ဒါကြောင့်အကြောင်းကြားစာများကိုစစ်ဆေးနေမှကြွလာသောအခါမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ, သင်သည်သင်၏အံဆွဲ, ပိုက်ဆံအိတ်, ဒါမှမဟုတ်အိတ်ကပ်ထဲကသင့်ရဲ့ device ကိုရရန်ရှိသည်။
ကို Android Device များအများစုဟာသူတို့ရဲ့ default အနေနဲ့နာရီအတွက် Widgets တွေအတူပါလာ။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ device ကိုစိတ်ကြိုက်မှကြွလာသောအခါဤသည်နေ့ရက်ကာလ, နာရီ Widgets တွေအများကြီးအဖော် app ကိုအတူရရှိနိုင်ပါသည်။ ကနှိုးဆော်သံ setting များနှင့်တစ်ကြိမ်ရှာဖွေနေခြင်းထက်ပိုပြီးအရာတစ်ခုခုရှိပြီးမဟုတ်လျှင်သင်အမှန်တကယ်ပဲအချိန်ပေါ်တစ်ဦးလက်ပတ်နာရီစောင့်ရှောက်ဖို့တိကျတဲ့နာရီ app ကိုမလိုအပ်ပါဘူး။ ယေဘုယျအားသင်တစ်ဦးအဖော် app ကိုအတူတစ်ဦးအေးမြဝစ်ဂျက်ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ ဤနေရာတွင်စာရင်းသင့်ရဲ့ home screen ကတစ်ဦးကျက်သရေကိုထည့်သွင်းဖို့ Android အတွက်အကောင်းဆုံးကိုနှိုးစက်နာရီ Apps နဲ့ Widgets တွေတချို့ရှိနေပါတယ်။
ဤနေရာတွင်ကျော်ကအကောင်းဆုံးနှိုးစက်နာရီ android- များအတွက် Widgets တွေ apps နေကြတယ်
Google ကနာရီအတူပါလာရာက Android app များများများလုပ်လျက်ရှိသည်။ Google ကနာရီ သငျသညျငွိမျဝနှင့်အတူဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မအင်္ဂါရပ်များစင်ကြယ် interface နဲ့ပဒေသာပူဇော်ဖို့ Google ကအဆိုပါ minimalistic apps များထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်ဒီဇိုင်းနှင့်သင်အလွယ်တကူနှိုးစက်သတ်မှတ်ထားနှင့်အချိန်ကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်ကြွလာသောအခါ၎င်းသည်အလွန်အသုံး App ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအချိန်မှတ်နာရီခလုတ်ကိုတစ် timer နေရာမှာတစ်နာရီနှင့်နှိုးဆော်သံရှိပါတယ်။
ဤရွေ့ကား Widgets တွေသုံးစွဲဖို့အလွန်လွယ်ကူပါတယ်။ ဒီ app အကြောင်းကိုနောက်ထပ်အလွန်ကြီးစွာသောအရာက Google ကဂေဟစနစ်ကိုထောက်ပံ့သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သငျသညျကို Google လက်ထောက်နှင့်အတူနှိုးဆော်သံကိုသတ်မှတ်လိုပါလျှင်ဥပမာ, ကကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်ပေးနိုင်သည်။ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါကအန်းဒရွိုက်အတွက်အကောင်းဆုံး apps များထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
android ဖုန်းများအတွက် UCCW နှိုးစက်နာရီ
ကောင်းပြီ, ဒီနာရီ widget ကတိကျသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်။ သငျသညျကျိန်းသေ app ကိုမှ-built နာရီကိုသုံးနိုင်သည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့အကြောင်းပြချက်များအတွက်ဤနေရာတွင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်တစ်ဦးနာရီတစ်ပင်မမျက်နှာပြင်ပေါ်ဘယ်လောက်စိတ်ကြိုက်ကိုကူညီနိုငျသောတစ်နေရာတည်းမှာထုံးစံဝစ်ဂျက်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျနောက်ခံ, စာသား, ဒီဇိုင်းနှင့်လည်းဘယ်လိုသုံးစွဲဖို့ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
UCCW အိမ် screen ပေါ်မှာဒီဇိုင်းနဲ့ colour scheme ဖြည့်ထားတဲ့သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပေါ်တွင်ဝစ်ဂျက်ကို, ထအောင်တစ်ဦးအေးမြ App ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျမဆိုအခြားနာရီဝစ်ဂျက်နှင့်အတူ customization နဲ့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၏အဆငျ့ရှိသည်မဟုတ်နိုင်ပါ။ သငျသညျကောင်းစွာတစ်ခုခုလုပ်ချင်လျှင်, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ပေါ်မှာလုပ်နိုင်ပါတယ်။
လူအတော်များများဟာ Android အတွက်ကြီးမားတဲ့နာရီ widget ကမလိုအပ်ပါဘူး။ ရိုးရှင်းစွာအချိန်ကိုပြောပြသည့်သာမန်နာရီ, လိုအပျသူအချို့ရှိနေဆဲရှိပါတယ်။ ဒီလမ်း, အနည်းဆုံးနာရီ အတိအကျတူညီပါဘူး။ ထို့အပြင်သူကရက်စွဲနှင့်အချိန်ပြောပြရန်တစ်ဦးအေးမြဒီဇိုင်းနှင့်အတူတစ် minimalistic နာရီဖြစ်ပါတယ်။
ဤသည်အဖော် app ကိုဝစ်ဂျက်နှင့်အတူကြီးမြတ်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာအချို့ရှိပါတယ်။ သင်အလွယ်တကူသင့်လိုအပ်ချက်နှုန်းအဖြစ်ပုံစံ, အရောင်, စာသားစတိုင်နှင့်နယ်စပ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဤသည်ကိုရှင်းရှင်းတစ် minimalistic App ဖြစ်ပါတယ်။ သင်အချိန်နှင့်အတူမည်သည့်အသေးစိတ်များဝစ်ဂျက်ကိုအဝတ်တန်ဆာကိုချွတ်နိုင်ပါတယ်။
နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အကြံပြုကြောင့်တစ်ပွင့်လင်းသည်နှင့်ရှာဖွေနေအအေး ရာသီဥတုနှင့်နာရီ widget က။ ဒီ app ရိုးရှင်းစွာသင်တစ်ဦးနှစ်သက်ဖွယ်နာရီနှင့်အတူ, သင်သည်ဤနာရီဝစ်ဂျက်နှင့်အတူလိုက်သင့်ပါတယ်, အတိအကျအိမ် screen ပေါ်မှာအခြေအနေများကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ဖို့ဆက်စပ်ချင်အချက်အလက်တွေအားလုံးကိုပြသထားတယ်။
ဒါဟာဝစ်ဂျက်ကိုဖွင့်တင်ထားရန်နှင့်အချို့ကိုသင်အကြီးအစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာရှိနိုင်ပါသည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်လွယ်ကူသည်။ ဒီ app ကိုအဓိကအားဖြင့်အချိန်နှင့်အတူရာသီဥတုအခြေအနေများအားပြောပြရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ရိုးရှင်းစွာအပေါ်မှာကိုအသာပုတ်နှင့်သင့်လက်ရှိတည်နေရာနှင့်အချိန်၏ရာသီဥတုမွမ်းမံမှုများနှင့်အတူ app တစ်ခုဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။
ယင်း၏ထူးဆန်းနာမည်ရှုပ်ထွေးမရကြဘူး။ BobClockD3 နီးပါးမည်သည့်နောက်ခံပေါ်တွင်ရိုးရှင်းစွာအကြီးအကြည့်ရာ, တစ်ဦးအေးမြနာရီ App ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ကျယ်ပြန့်ကြည့်ဘို့မွမ်းမံလေ၏ဒီဇိုင်းတပ်ဆင်ထားခြင်းနှင့်သင်ပင်မမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအကြီးအ aura ပေးသည်။ ရိုးရှင်းစွာအနာရီ app ကိုဖြန့်ချိဖို့ဝစ်ဂျက်ကိုအပေါ်ထိပုတ်ပါ။
ဒါဟာသင့်ရဲ့ဒီဇိုင်းအစီအစဉ်နှုန်းအတိုင်းနာရီ personalize မှစာသားအရောင်တိုးတက်လာဖို့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးပါရှိပါတယ်။ ဒါဟာအစအောက်ခြေရက်စွဲနှင့်နေ့ရက်ကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
သင်အမှန်တကယ်ပိုကောင်းဝစ်ဂျက်ရှိပြီးသောအလွန်ကြီးစွာသောရှာဖွေနေနာရီ app ကို၏ search မှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျကျိန်းသေပုနှင့်အတူလိုက်သင့်တယ် ရိုးရှင်းသောမိုးလေဝသ & နာရီ Widget လေး။ ဒါဟာအလွန်လှပရိုးရှင်းတဲ့ရှာဖွေနေဝစ်ဂျက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သင်အလွယ်တကူရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့နေ့စွဲနှင့်အချိန်နှင့်အတူမည်သည့် Android အတွက်ဆောင်ပုဒ်နှင့်နောက်ခံနှင့်အတူကကိုက်ညီနိုင်ပါ။
သငျသညျက၎င်း၏င့်လင်းမြင်သာအဖြစ်ဝစ်ဂျက်၏နောက်ခံအရောင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဒါကွောငျ့ကအရပျထဲကထွက်စရာမလိုဘဲအိမ် screen ပေါ်မှာကောင်းစွာ embedded နိုင်ပါသည်။ သင်တို့သည်လည်းသူကဆိုဒ်ပြောင်းရန်နိုင်ပါတယ်။
သင်သည်သင်၏ခင်းကျင်းပြသသည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုများရှာဖွေရေးအတွက်ရှိပါသလား Clear ကိုနာရီသင့်လိုအပ်ချက်အတွက်အကောင်းဆုံးနှိုးစက်နာရီ App ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ dial လှည့်နှင့်အတူအချိန်တငျပွနိုငျသောလှလှပပဒီဇိုင်းကို Android နာရီ, ဖြစ်ပြီး, တကယ့်လှပထူးခြားတဲ့လှပါတယ်။
သင်ပိုမိုသိသာထင်ရှားစွာသင့်လိုအပ်ချက်နှုန်းအဖြစ်နာရီတိုးတက်လာဖို့အကြီးအစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင်သငျသညျအကြီးအစိတ်ကြိုက်များအတွက်မြောက်မြားစွာ themes များရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သင်ကယ့်ကိုအလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်စေနှစ်သက်တဲ့အရောင်တွေကောက်လို့ရပါတယ်။
Sense သည် Flip နာရီ
အဆိုပါအင်္ဂါရပ်များ လှန်နာရီ ထိုသို့ရွေ့လျားမှုအတွက်အလွန်ကောင်းစွာကြည့်ရှုသည်။ ဒါဟာနာရီ widget ကအကြောင်းကိုလှပတဲ့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာအချို့ရှိသည်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်ကကြီးမြတ်ခြင်းနှင့်အံ့သြဖွယ်ရာသီဥတု widget ဖြစ်ပါတယ်နှငျ့သငျကိုလည်းနှင့်အတူအချို့သောရာသီဥတု updates များကိုရရှိနိုင်သည်။
ရာသီဥတု app ကိုဖွင့်လှစ်ဖို့ကအပေါ်ထိပုတ်ပါ။ သင်ရထားဘူတာရုံနာရီ၏အသွင်အပြင်ရှိသည်ဖို့ချင်လျှင်, သင်ကျိန်းသေဒီ app ကိုခစျြလိမျ့မညျ။
ဤရွေ့ကားအန်းဒရွိုက်အတွက်အကောင်းဆုံးနှိုးဆော်သံနှင့်နာရီဝစ်ဂျက်များနှင့် app များကိုအချို့တို့ကဤ Android အတွက်အမြဲတမ်းပြင်ဆင်ချက်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။ ကျနော်တို့နာရီ Widgets တွေတစ်ခုကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ဤသည်နေ့ရက်ကာလကျနော်တို့ဆက်ကပ်အပ်နှံနာရီ Widgets တွေလျစ်လျူရှုရန်အသုံးပြုကြသည်။ အဆိုပါပြဿနာကိုသူတို့တစ်တွေစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုတာပါပဲ။ ထိုကွောငျ့, သငျသညျကျိန်းသေသည်ဤနှိုးစက်နာရီ Apps နဲ့ Widgets တွေရှိသည်ဖို့လိုပေမည်။
နာရီ Widget လေး
နှိုးစက်နာရီ Apps နှင့် Widgets Android အတွက်နှိုးစက်နာရီ Apps နှင့် Widgets အကောင်းဆုံးနှိုးစက်နာရီ Apps ကပ